यसरी बनाईदैछ राजधानीमै कुकुर बुद्धाश्रम,१२ रोपनी जग्गामा कति कुकुर रखिदैछ? « हाम्रो ईकोनोमी
यसरी बनाईदैछ राजधानीमै कुकुर बुद्धाश्रम,१२ रोपनी जग्गामा कति कुकुर रखिदैछ?
भुस्याहा कुकुरका लागि बुद्धाश्रम, संसारमा छ कि छैन,त्यो अर्कै कुरा भयो तर काठमाडौंंमा भने भुस्याहा कुकुरका लागि बुद्धाश्रम बन्ने भएको छ । पशु स्रोत केन्द्र नामाकरण दिइएको कुकुर बृद्धाश्रम बनेपछी भने नेपालमा दुईथरि बृद्धाश्रम हुनेछ ।
एक मानिसको, अर्को कुकुरको । युवाजति विदेश जाने भएपछि नेपालमा कि बालक, कि बृद्धामात्र रहने छन् । विदेश गएकाहरुले नेपालमा बृद्धाश्रम बनाउन चन्दा पठाएको पठायै छन् । बृद्धाश्रम नेपाल पो बन्ने भयो ।
विगत एक दशकदेखि ‘कुकुर वृद्धाश्रम’का लागि वकालत गरिरहेको एउटा समूह यही योजनामा लागिरहेको छ । यो समूह भन्छ– अबको एक वर्षमा यस्तो पशु स्रोत केन्द्र खुल्नेछ ।
पशु कल्याणका क्षेत्रमा कार्यरत एनिमल नेपाल नामक संस्था बुढेसकाल लागिसकेका र घाइते अवस्थामा सडकमा भौंतारिरहेका कुकुरहरूलाई आश्रय उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्यका लागि पशु स्रोत केन्द्र स्थापनाको तयारीमा छ ।
करिब एक करोड रुपैयाँ खर्चिएर संस्थाले ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको डुकुछापमा १२ रोपनी जग्गा किनेको छ । यही जग्गामा कुकुर बुद्धाश्रम बन्ने तैयारी सुरु भइसकेको छ । यस कार्यका लागि एनिमल नेपालले थप आर्थिक सहयोगको आह्वान पनि गरेको अभियानले जनाएको छ ।